MAK 12 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (MAK 12)
Mgbe ahụ Jisọs bidoro ịkọrọ ndị mmadụ ahụ akụkọ. Nke a bụ otu nꞌime akụkọ ọ kọọrọ ha. “Otu nwoke kụrụ mkpụrụ vaịnị nꞌubi ya, jiri mgbidi gbaa ubi ahụ gburugburu. O wukwara mbadamba ala ebe a ga-anọ na-apịpụta mmiri vaịnị ahụ, wuokwa ụlọ ebe ndị nche ga-anọ. Mgbe o mesịrị ihe ndị a, o nyefere ubi ahụ nꞌaka ụfọdụ mmadụ ka ha lekọtaa ya anya.
Mgbe oge ịghọ mkpụrụ vaịnị ahụ ruru, onyenwe ubi ahụ zipụrụ otu onye na-ejere ya ozi ka o jekwuru ndị na-elekọta ubi ahụ, nata ha ụfọdụ nꞌime mkpụrụ ubi ahụ.
Ma ndị ahụ jidere onyeozi a tie ya ihe. Emesịa, ha zipụrụ ya nꞌaka efu.
“Emesịakwa, onyenwe ubi ahụ zipụkwara onye ọzọ na-ejere ya ozi. Ma ndị na-elekọta ubi ahụ tikwara ya ihe, tụọ ya nkume, tụwaa ya isi, meekwa ya ihe ihere.
Onyenwe ubi ahụ zigakwara onye ọzọ, ma ha gburu ya. O zigakwara ọtụtụ ndị ozi, ma ndị na-elekọta ubi ahụ gburu ụfọdụ, tie ndị ọzọ ihe.
Tutuu ruo mgbe onyenwe ubi ahụ nwere nanị otu onye ọzọ fọdụrụ nke ọ ga-eziga, nke bụ ọkpara ya ọ hụrụ nꞌanya. O zigara ya nꞌebe ndị na-elekọta ubi ahụ. Echiche ya bụ na ha ga-asọpụrụ ọkpara ya.
“Ma mgbe ndị na-elekọta ubi ahụ hụrụ ọkpara nwoke a ka ọ na-abịa, ha sịrịtara onwe ha, ‘Lee! onye a na-abịa bụ onye ga-eketa ihe nile onyenwe ubi a nwere. Bịanụ ka anyị gbuo ya, ka ubi a bụrụkwa nke anyị.’
Ha jidere ya gbuo ya, tufee ahụ nꞌazụ mgbidi ubi ahụ.
“Gịnị ka unu chere onyenwe ubi ahụ ga-eme? Ọ ga-abịa laa ndị ajọ mmadụ ahụ nꞌiyi. Ọ ga-enyefekwa ndị ọzọ ubi ahụ nꞌaka.
Unu chetara ihe akwụkwọ nsọ kwuru? Ọ sịrị na ‘Nkume ahụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ iji ime ihe ọ bụla, abụrụla nkume dị mkpa nꞌụlọ ahụ ugbu a.
Ọ bụ Onyenwe anyị rụrụ ọrụ a, nke dị mma nꞌanya anyị.’ ”
Mgbe ahụ ndị isi ndị Juu ahụ chọrọ ụzọ ijide ya, nꞌihi na ha maara na ọ bụ ha ka Jisọs ji atụnye ndị mmadụ ọjọọ ahụ na-elekọta ubi nꞌime akụkọ ahụ ọ kọrọ. Ma ha emetụghị ya aka nꞌihi na ha tụrụ egwu ihe ndị mmadụ ga-eme ha. Ya mere, ha hapụrụ ya pụọ.
Ma ndị isi Juu mesịrị zite ụfọdụ mmadụ site nꞌotu ndị Farisii na ndị otu Herọd ka ha gwa ya okwu, ile ma ha ga-esite nꞌokwu ọnụ ya jide ya.
“O ziri ezi ka anyị tụọ, ka ị sị anyị hapụ ịtụ?” Ma Jisọs ghọtara ajụjụ aghụghọ ha. Ọ sịrị ha, “Gịnị mere unu ji chọọ ịghụ m ọnụ? Wetaranụ m otu mkpụrụ ego ka m lee ya anya.”
Ha wepụtara otu mkpụrụ ego nye ya. Jisọs lere ego ahụ anya jụọ ha ajụjụ sị, “Ihu onye na aha onye ka e bikwasịrị nꞌego a?” Ha zara sị, “Ọ bụ nke Siza.”
Mgbe ahụ Jisọs zara ha sị, “Nyenụ Siza ihe ruuru Siza. Ma nyekwanụ Chineke ihe ruuru ya.” Ọsịsa Jisọs juru ndị mmadụ nọ nꞌebe ahụ anya.
Emesịa, ndị Sadusii pụtara ịjụ ya ajụjụ. Ndị Sadusii bụ ndị na-ekwenyeghị na mbilite nꞌọnwụ dị. Nke a bụ ajụjụ ha jụrụ Jisọs.
“Onye ozizi, Mosisi nyere anyị iwu sị na ọ bụrụ na nwoke ọ bụla anwụọ na-amụtaghị nwa nwanne ya nwoke ga-alụ nwụnye nwoke ahụ, mụta ụmụ ndị ga-aza aha nwoke ahụ nwụrụ anwụ.
Ugbu a e nwere ụmụnne asaa. Nke mbụ lụrụ nwụnye ma ọ nwụrụ na-amụtaghị nwa.
Nke abụọ lụrụ nwanyị ahụ di ya nwụrụ, ma ya onwe ya nwụkwara na-amụtaghị nwa.
Ihe ndị a siri otu a mee tutuu ụmụnne asaa ahụ alụọ nwanyị ahụ, ma o nweghị onye nꞌime ha mụtara nwa. Emesịa, nwanyị ahụ nꞌonwe ya nwụkwara.
“Ugbu a, nꞌụbọchị mbilite nꞌọnwụ ònye nꞌime mmadụ asaa ahụ ka nwanyị a ga-alakwuru ka ọ bụrụ di ya?”
Jisọs zara sị ha, “Ihe na-enye unu nsogbu bụ na unu amaghị ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Unu amakwaghị ihe ọ bụla banyere ike Chineke.
“Ma banyere ndị nwụrụ anwụ isite nꞌọnwụ bilile, ọ̀ bụ na unu agụtabeghị nꞌakwụkwọ Ọpụpụ ihe Chineke gwara Mosisi mgbe o gosiri Mosisi onwe ya nꞌọkụ ahụ na-enwụ nꞌosisi? Chineke gwara ya sị, ‘Abụ m Chineke Eberaham, Chineke Aizik, na Chineke Jekọb.’
“Ihe Chineke na-akọwara Mosisi nꞌoge ahụ bụ na ya bụ Chineke ndị dị ndụ, ọ bụghị Chineke ndị nwụrụ anwụ. Nꞌebe a ka unu dahiere nꞌechiche unu!”
Otu nꞌime ndị ozizi iwu bịara nꞌebe ahụ nꞌoge ha na-ekwu okwu ahụ, guzo gee ntị nꞌihe ha na-ekwu. Mgbe ọ hụrụ na Jisọs nyere ndị Sadusii ahụ ezi ọsịsa, ọ jụrụ Jisọs ajụjụ sị, “Nꞌime iwu nile olee nke kachasị mkpa?”
Jisọs zara sị ya, “Ọ bụ iwu ahụ kwuru sị, ‘Geenụ ntị ndị Izirel! Onyenwe anyị bụ nanị otu Chineke.
Nwoke ahụ zara sị, “Ị zara nke ọma mgbe i kwuru na Chineke bụ nanị otu, na e nweghị chi ọzọ di karịa ya.
Ị zakwara nke ọma mgbe ị zara na ịhụ ya nꞌanya dị mkpa karịa aja nsure ọkụ na onyinye ọchụchụ aja nile.”
Emesịa, mgbe Jisọs nọ na-ezi ndị mmadụ ihe, ọ jụrụ ha ajụjụ sị, “Gịnị mere ndị ozizi iwu unu ji na-sị na Onye nzọpụta ahụ na-abịa bụ nwa Devidi?
Emesịa, Jisọs gwara ndị mmadụ ahụ okwu sị, “Kpacharanụ anya unu nꞌebe ndị ozizi iwu nọ. Nꞌihi na ọ na-atọ ha ụtọ iyi uwe buru ibu na-agagharị.
Ọ na-atọ ha ụtọ ka e kelee ha ekele pụrụ iche nꞌahịa. Ọ na-atọkwa ha ụtọ ka e nye ha oche dị mkpa nꞌụlọ ekpere unu na nꞌoge mmemme ọ bụla.
Ma ha bụ ndị na-abanye nꞌụlọ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ pụnarị ha ihe ha nwere. Ha na-ezo ihe ha bụ, ma na-ekpe ogologo ekpere nꞌọha. Nꞌihi ihe ndị a nile ha na-eme, ahụhụ ha ga-adị ukwuu!”
Emesịa, Jisọs gara nọdụ ala nꞌebe ọ ga-anọ na-ahụ ndị mmadụ mgbe ha na-etinye onyinye ha nꞌime igbe onyinye. Ọtụtụ ndị ọgaranya bịara tụnye ego buru ibu.
Ma otu nwanyị batara. Ọ bụ ogbenye, bụrụkwa onye di ya nwụrụ. Ọ tụnyere mkpụrụ ego ọla abụọ ntakịrị nke ruru otu kobo.
Jisọs kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya sị ha, “Nwanyị ahụ atụnyela ego dị ukwuu karịa ndị nile tụnyere ego nꞌime igbe onyinye a.
Nꞌihi na ndị ọzọ sitere nꞌịba ụba nke ego ha nwere tụnye, ma nwanyị a tụnyere ego nile o nwere nꞌụlọ ya.”